သတင်း - Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် သတ္တုပြား ဖဲချပ်ရိုက်စက်
အကန့်အသတ်နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သော တွင်းထွက်သယံဇာတများကြောင့် လူသားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ သယံဇာတများ အဆက်မပြတ် လျော့နည်းလာကာ သယံဇာတပြတ်လပ်မှုသည် လူသားများ တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ သတ္တုထုတ်ကုန်များအသုံးပြုရာတွင် အဟောင်းနှင့်အသစ် အစားထိုးမှုဖြစ်စဉ်သည် ရှောင်လွှဲ၍မရပေ။ သတ္တုပစ္စည်းများ၏ ချေးချွတ်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့် သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကြောင့် သတ္တုအပိုင်းအစ အများအပြားကို နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ စွန့်ပစ်သတ္တုများကို ဆန္ဒအလျောက် စွန့်ပစ်ပါက ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော သတ္တုအရင်းအမြစ်များကို ဆုံးရှုံးစေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သတ္တုပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း အရည်ကျိုခြင်း၊ သတ္တုအပိုင်းအစများ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် လုံးဝအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်စက်သတ္တုပစ္စည်း အမျိုးမျိုးအတွက် ထုပ်ပိုးမှု ပိတ်ဆို့ခြင်း နှိပ်ခြင်း လျှောက်လွှာ။ ပစ္စည်းကို ပစ္စည်းသေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါသည် ပစ္စည်းကို အမျိုးမျိုးသော သတ္တုအထုပ်များအဖြစ် ဖိသိပ်ကာ ဖိအားအောက်တွင် အလုပ်လုပ်သည်။ ဝန်မပါဘဲ ဟိုက်ဒရောလစ်အထုပ်ကိုဖွင့်ပါ၊ မော်တာဆီပန့်ကိုစတင်ပါ၊ ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင်အူတိုင်သည် အလယ်တွင်တည်ရှိပြီး ဆီပန့်၏ဆီထွက်ရှိမှုသည် ဖိအားအောက်တွင် အီလက်ထရိုဟိုက်ဒရောလစ်ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်မှတစ်ဆင့် ဆီဆလင်ဒါသို့ပြန်သွားသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်။ ဒုတိယအချက်မှာ ဟိုက်ဒရောလစ်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဆီပန့်အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ဆီပန့်၏အထွက်သည် ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်မှတဆင့် ချိန်ညှိမှုဖိအားအောက်တွင် ထိန်းညှိပေးသောအဆို့ရှင်မှတဆင့် ဝင်ရောက်သည်၊ ပင်မဆလင်ဒါအပေါက်နောက်တွင် ပစ္စတင်လှံတံသည် ဖြည်းညှင်းစွာကျဆင်းသွားကာ အရှေ့ဘက်ရှိဆီများ ဆလင်ဒါ။ ဆီတိုင်ကီကို ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်မှတဆင့် ဆီတိုင်ကီမှ လက်ခံရရှိပြီး ထုပ်ပိုးစက်သည် ဖြည့်သွင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို သဘောပေါက်ပါသည်။ သတ္တုဟိုက်ဒရောလစ် ထုပ်ပိုးခြင်းကို ပြန်လည်သတ်မှတ်လိုက်သည်၊ ဆီပန့်အလုပ်လုပ်သည်၊ ဆီပန့်အထွက်ကို ထိန်းညှိဖိအားအောက်တွင် ပင်မဆလင်ဒါ၏ ရှေ့ခန်းသို့ လွှဲပြောင်းသည်၊ ဆီသည် တိုင်ကီသို့ ပြန်သွားပြီး ဆလင်ဒါနောက်ဘက်ရှိ ထုပ်ပိုးမှုကိစ္စ၊ ဆီပြန်လာသည်၊ .
လျှောက်လွှာ Y81 စီးရီး သတ္တုဗလာ သတ္တုအညစ်အကြေး အမျိုးမျိုး (အညစ်အကြေးများ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်၊ သံမဏိအပိုင်းအစ၊ အလူမီနီယံအပိုင်းအစ၊ ကြေးနီအပိုင်းအစ၊ သံမဏိအပိုင်းအစ၊ မော်တော်ကားအပိုင်းအစ စသည်တို့) ကို cuboid၊ အဋ္ဌဂံပုံသဏ္ဍာန်၊ ဆလင်ဒါနှင့် အခြားသော အရည်အချင်းပြည့်မီသော တာဝန်ခံအဖြစ်သို့ ညှစ်ယူနိုင်သည်၊ နှင့် ရောစပ်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် မီးဖိုပုံသွန်းလုပ်ခြင်း၏အရှိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအရိုးများကို သံမဏိစက်များ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း၊ အပြင် သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
1. ဟိုက်ဒရောလစ်ဒရိုက်အားလုံး၊ manual လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ် PLC အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
2. ပက်ကေ့ချ်ပေးပို့ခြင်းနည်းလမ်းတွင် အထုပ်ကိုလှန်ခြင်း၊ အထုပ်ကို တဖက်တွန်းခြင်း၊ အထုပ်ကို ရှေ့တွန်းခြင်း၊ အထုပ်ကို လက်စွဲကိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။
3. ရွေးချယ်ရန်မော်ဒယ်အမျိုးမျိုး- မတူညီသောဖိအား၊ သေတ္တာအရွယ်အစား၊ အထုပ်အရွယ်အစားပုံသဏ္ဍာန်၊
4. ပါဝါထောက်ပံ့မှုမရှိပါက၊ ၎င်းကို ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်။
Aluminum Foil Baler စက်, Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် Baler, Pop-Top Can Baler ကိရိယာ, အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားဖဲချပ်, Leaf Compactor နှင့် Baler, အပိုင်းအစ သတ္တုကြိတ်စက်,